Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo loo doortay afhayeenka dhaq dhaqaaqa xoogagga Al-Shabaab Al-Mujaahidiin. | JILYAALE_ONLINE
Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo loo doortay afhayeenka dhaq dhaqaaqa xoogagga Al-Shabaab Al-Mujaahidiin.
Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo ka mid ah mas’uuliyiinta sar sare ee dhaq dhaqaaqa Al-Shabaab ayaa loo doortay Afhayeenka rasmiga ah ee dhaq dhaqaaqa Al-Shabaab.
Sida aanu kasoo xigannay Website-ka ku hadla afka Kooxdan Al-Shabaab, oo ah kooxda sida aad ah uga soo horjeeda siyaasadda dowladda KMG ah, iyo waliba joogitaanka ciidamada Ethiopia gudaha Somalia.
Website-ka Al-Mujaahid, ayaa sidoo kale, tilmaamay in Sheekh Muqtaar Roobow Abuu Mansuur, si rasmi ah loogu doortay Afhayeenka dhaq dhaqaaqa Al-Shabaab, isagoona sidoo kale xusay in Abuu Mansuur uu yahay mas’uulka kaliya ee la hadla Warbahinta dhinacooda.
Abracadii lasoo dhaafay ayay aheyd markii, Abuu Mansuur uu wareysi khaas ah siiyay Idaacad ka mid ah kuwa Muqdisho ee lagu magacaabo Simba, isla markaana kaga hadlay wareysigaa arrimo fara badan, isagoona ku muujiyay sida ay uga go’an tahay sii wadida halganka balaaran ee ay ugu jiraan dib u xoreynta dalka, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Abuu Mansuur ayaa ka gaabsaday in uu carabka ku dhufto halka uu ku sugan yahay, hasa ahaatee, waxaa uu si ku cel celis ah, ciidamada Ethiopia iyo kuwa uu ku sheegay dabadhilif, in ay xad gudubyo ka geestaan gudaha magaalada Muqdisho.
Halkaan ka akhri Qoraalka ay soo qortay Shabakada Al-Shabaab
Sheekh Mukhtaar Roobow Cali (Abu Mansuur) oo loo doortay afhayeenka Rasmiga ah ee Xarakada Shabaab Al Mujaahidiin.
Xarakada Shabaab Al Mujaahidiin ee jihaadka ka wada gudaha dalka Somaliya ayaa magacowday Afhayeen rasmi ah oo usoo gudbiya Warbaahinta Caalamka iyo tan gudaha dhamaan howlaha Dhaq dhaqaaqa iyo akhbaarta Mujaahidiinta.
Afhayeenka Rasmiga ah ee dhaq dhaqaaqa Al Shabaab ayaa loo doortay Al Sheykhul Mujaahid Mukhtaar Roobow Cali (Abu Mansuur) Ilaah ha dhowree.
Dhamaan wakaaladaha wararka iyo Idaacadaha waxaa ay ka qaadan karaan akhbaarta Mujaahidinta Al Shabaab afhayeenka,oo isaga ah isha wararka Mujaahidiinta Al Shabaab.
Maxaad ka taqaan Afhayeenka Al Shabaab?.
Magaca: Mukhtaar Roobow Cali (Abu Mansuur).
waxaa uu ku dhashay magaalada Xudur ee gobolka Bakool sanadku markuu ahaa 1969 -kii.
Sheekhu waxaa uu waxbarashada dugsiga Hoose,Dhexe iyo Sare-ba kusoo qaatay magaalada Xudur ee xarunta Bakool.
Waxaa uu ku biiray Masaajida isagoo xalaqaatka Cilmiga laazimay si weyna u bartay arrimaha sharciga Diinta Islaamka.
Waa Hogaamiye ah abaanduule Milatari,sanadku markuu ahaa 1996– kii waxaa uu magaalada Xudur ka aas aasay Mucaskar tababar oo isaga uu tababare ka ahaa,waxaana lagumagacaabayay Al- Hudaa ,Mucaskarkaasi waxaa uu shaqeynayay ilaa 1998 -kii,halkasina waxaa lagu tababaray Mujaahidiin fara badan.
Sheekha waxaa uu hogaamiyay Mujaahidiintaasi iyagoo si wadajir ah kaga qeybgalay dagaaladii Gedo ee Mujaahidiinta ay kula galeen Tigreeda,waxaana dagaaladaasi uu ahaa Hogaamiye Ciidan .
Safar: Sanadihii 2001 -dii ilaa 2002 -dii waxaa Sheekhu uu u socdaalay dalka Afghanistan oo ahaa Xarunta Mujaahidiinta Caalamka,halkaasi ayuu tababaro kula soo qaatay Walaalaha Mujaahidiinta.
Dagaalo: Abu Mansuur waxaa uu ka qeybgalay dagaalo aad u fara badan oo Jihaad ah,waxaana ka xusi kareynaa:-
1– Dagaalkii Gedo ee ka dhanka ahaa Amxaarada,Sheekhu dagaalkani waxaa uu ahaa Hogaamiye Ciidan .
2– Dagaalkii Mujaahidiinta Caalamka ee Daliban iyo Al Qaacida kaga hortageen duulaankii Madaxa Saliibiyiinta Caalamka ( America ) uu ku qaaday dalka Afghanistan,Sheekha kolkaasi waxaa uu ahaa Mujaahid ku hoos jira Raayada Muslimiinta.
3– Dagaaladii Muqdisho lagula galay Isbaheysigii Ashahaada La dirirka,Sheekhu dagaaladaasi waxa uu ahaa Taliyihii Ciidamadii Mujaahidiinta dagaalka ku jirtay.
Jago: Sheekh Mukhtaar kolkii Maxaakimta Islaamka ay dalka qabsadeen waxaa uu ahaa Kuxigeenka Waaxda Amaanka Maxaakimta .
Hadana waxaa uu yahay Afhayeenka Xarakada Shabaab Al Mujaahidiin.
….اللهم احفظ قادتنا وأمراء المجاهدين من كل سوء
والله غالب على أمره ولكن أكثرالناس لايعلمون
This entry was posted in Buurfuule and tagged Al-Shabaab-Al-Mujaahidiin. Bookmark the permalink.
← Ciidamo fara badan oo si aad ahna u tababaran, oo xoog kula wareegay gacan ku heynta Degmada Bu’aale.
Boqor Buur-madow “Ma jiro Isin Majeerteeniya ah oo dhexdhexaad ah, kuligood waxay la safan yihiin Puntlnad, bisad Dhiig leh bey C/llaahi Yuusuf kula tukanayaan Xamar”. →